Muuri News Network » Muwaadin Somali-Swedish ah oo Amiir u ahaa Koox katirsan Daacish oo la dilay
Muwaadin Somali-Swedish ah oo Amiir u ahaa Koox katirsan Daacish oo la dilay
Dowlada Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyn ay fuliyeen Diyaaradahooda dagaalka ku dishay dagaalyahano katirsan Kooxda Daacish ay ku jiraan labo nin oo heesata dhalashada dalka Sweden .
Labada Nin ee heesata Dhalashada dalka Sweden lana dilay ayaa waxaa ku jira Muwaadin Soomaali ah oo heestay Dhalashada Dalka Sweden kaa oo lagu magcaabi jiray Khalid Osman Tima-yare, waxa uuna ninkan Amiir kuxigeen ka ahaa Guutadda Anwar Cawlaki oo katirsan Kooxda Daacish.
Kolonel Steve Warren, oo ah Afhayeenka Hawlgalladda Xalinta Soo-jireenka ee Milliteriga Maraykanka, ayaa sheegay in Duqeyn Diyaaradahooda fuliyeen lagu dilay Dagaalyahano katirsan Daacish ay ku jiraan labo dagaalyahan oo heesata dhalashada Sweden, kuwaa oo lagu kala magacaabo Khalid Osman Tima-yare oo asalkiisu Soomaali yahay iyo Harris Cary Saneen oo isna kasoo jeeda Bosnia.
Afhayeen ayaa sheegay in Duqeyntan oo ka dhacday meel ku dhow Degmadda Ragnina ee dalka Syria, lagu dilay Khalid Osman Tima-yare uu sheegay in uu ahaa kuxigeenka Amiirka Guutadda Anwar Cawlaki, waxa uuna tilmaamay in ninkan uu muhiim u ahaa Kooxda Daacsh.
Guutadda Anwar Cawlaki oo ahaa nin dhalinyaro ah ayaa kunoolaa magaalada Göteborg ee dalka Sweden, wiilkan ayaana ahaa ciyaaryahan kahor inta uusan kasoo tagin dalka Sweden kuna biirin dagaayahanada Kooxda Daacish.
Dalalka Siiriya iyo Ciraaq waxaa lagu dilay dhalinyaro Soomaaliyeed oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaa oo heesta dhalashada wadamo kala duwan, waxa ayna dhalinyaradan kamid ahaayeen dagalayahanada Kooxda Daacish.